सातै प्रदेशमा सुरु भयो कोरोना खोप अभियान – RealPati.com
सातै प्रदेशमा सुरु भयो कोरोना खोप अभियान
काठमाडौं, सरकारले हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको झन्डै एक वर्षमा त्यसविरुद्ध बुधबार खोप अभियान सुरु गरेको छ । ढुक्क भएर खोप लगाउन सरकारी निकायका अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । यो अभियान बुधबार बिहान १० बजेदेखि सातै प्रदेशबाट सुरु गरिएको हो ।
‘खोप लगाएपछि कसैलाई कुनै असर देखिँदैन । कसै–कसैलाई सामान्य असर देखा पर्न सक्छ। जीउ दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, अल्छी लाग्ने, कमजोरी महसुस हुन सक्छ। खोप लगाएको ठाउँमा दुख्न सक्छ। डाबर देखिन सक्छ। ती असर केही समयपछि आफैं हराएर जाने हुन्छ’, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव एवं कार्यकारी प्रमुख डा। प्रदीप ज्ञवालीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘कतिपय अवस्थामा यदाकदा औषधि पनि आवश्यक देखिन सक्छ। केही असर देखिए पनि आत्तिनु पर्दैन।’
परिषद्ले खोप भण्डारण, ढुवानी, खोप लगाउँदा र लगाइसकेपछिको प्रभावबारे निर्देशिका बनाएर अनुसन्धान गर्दै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६२ अस्पताल र १ सयभन्दा बढी खोप केन्द्रमा खोप लगाइने जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले बुधबार ६५ भन्दा बढी जिल्लामा एकसाथ खोप लगाउन थालिने बताए । मुलुकभर ४ लाख ३० हजार जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखी सातवटै प्रदेशमा खोप ढुवानी भइसकेको डा. गौतमले बताए । काठमाडौंमा सरकारी र निजी गरी ११ वटा ठूला अस्पतालमा खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ’, खोप शाखा प्रमुख डा। गौतमले भने, ‘अरू मुलुकले नपाउँदै हामीले पाएका छौं। ढुक्क भएर लगाउन सकिन्छ।’
पहिलो चरणमा भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोज लगाउन लागिएको हो। प्रदेश १ मा ९६ हजार, प्रदेश २ मा ३४ हजार, बागमतीमा ७६ हजार डोज खोप भण्डारण गरिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ४० हजार, लुम्बिनीमा ८८ हजार, कर्णालीमा १२ हजार र सुदूरपश्चिममा १६ हजार खोप पुर्‍याइएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार गर्भवती, सुत्केरी, स्तनपान गराइरहेका महिला र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई खोप अभियानमा सहभागी गराइनेछैन। खोप लगाउनेलाई खोप लगाएको प्रमाणका रूपमा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। परिचयपत्रमा खोप लगाउने व्यक्तिको नाम, उमेर, पालिका, वडा नम्बर, सम्पर्क नम्बर, पहिलो र दोस्रो पटक खोप लगाएको मिति, खोपको नाम, खोपको ब्याच नम्बर तथा खोप लगाइदिने स्वास्थ्यकर्मीको नाम उल्लेख हुन्छ।
प्रवक्ता डा. गौतमले एउटा डोज लगाएको चार सातापछि दोस्रो पटक लगाउनुपर्ने बताए। दोस्रोपटक खोप लगाउँदा कार्ड अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
सरकारसँगै छैन वाइडबडी किनेको प्रमाण, पर्यटनमन्त्री भन्छन्– मसँग कागज छैन
मोदीले प्रबुद्ध समुह (ईपीजी)लाई आधा घण्टा पनि समय नदिएपछि…
जलवायु परिवर्तनको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि नेपालगञ्जमा १७ बुँदे घोषणापत्र जारी
तनहुँमा ७० भन्दा बढी नेकपा कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश
एकैदिन थपिए ९ हजार बढी कोरोना संक्रमित, ५४ जनाको मृत्यु
कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजनको सिलिण्डर बोकेर पुर्‍याउँदै नायक राज घिमिरे
निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै काठमाडौमै सांसद र नगरपालिका प्रमुखबाट पर्खाल शिलान्यास
भारतमा रहेका नेपालीलाई कोरोनाबाट बचाउन पाण्डेको आग्रह 100 views
कोरोना संक्रमितलाई लाभदायक पानस अल्ट्रा भायोलेट भिटामिन ‘डी’ थ्रि जेनेरेटरको नेपालमा परिक्षण हुँदै 77 views
साहित्यकार मधिकर्मीलाई बाटुली खिलध्वज लघुकथा सम्मान 68 views
फेकनको सक्रियतामा १ सय २५ जनाले लगाए कोरोना खोप 65 views
कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजनको सिलिण्डर बोकेर पुर्‍याउँदै नायक राज घिमिरे 57 views
दशैंदेखि चल्ने भयो नारायणीमा रिभर क्रुज (पानीजहाज)
निर्मला हत्याकाण्ड : एसपी विष्टका छोराले प्रधानमन्त्रीलाई लेखे पत्र (पत्रसहित)
बस दुर्घटनामा ३७ जना घाइते
फेसियल हाउसललाई “नेपाल्स नम्बर वान ब्युटी सैलुन “अवार्ड प्रदान
गायिका शर्मिला विसी र गायक टेक बहादुर सुनार को आवाजमा ‘ तिहारै आयो ’